FAHASARONANA ASA RATSY :: Azo sary mialoha ilay lehilahy saika hamaky trano • AoRaha
FAHASARONANA ASA RATSY Azo sary mialoha ilay lehilahy saika hamaky trano
Noraisim-potsiny ity lehilahy nikasa hamaky trano iray, teny Ankerana, ny alin’ny sabotsy hifoha ny alahady lasa teo. Tazana tao amin’ny horonantsary voarain’ny fakantsary miafina ny sariny mivezivezy eo an-tokontany toy ny mitady fomba hidirana ao an-trano.
Nampandre ny mpitandro filaminana ny tompon-trano. Teny an-dalana hamonjy ny antso vonjy ny pôlisy no nifanena tamin’ ny lehilahy iray nampiahiahy. Nosavaina ity farany. Nahitana fitaovana maromaro toy ny fanoitra teny aminy. Noentina avy hatrany hatao famotorana izy. Tamin’izay no naha-fantarana fa io ilay lehilahy azo sary nihaodihady teo amina tranon’olona iray, izay nampandre ny mpitandro filaminana.
«Niaiky izy fa saika hamaky trano. Vao avy novidiany hanapitsohana varavarana ireo fitaovana tratra teny aminy ireo. Nambarany ihany koa fa efa nivezivezy teny Ankerana izy, ny harivarivan’ny sabotsy, nijery izay trano hovakiany», araka ny tatitra avy amin’ny pôlisy.
FAHAFATESANA MPITANDRO NY FILAMINANA :: Tratra ireo namono ny lehiben’ny Borigadin’ ny zandary